3သိန်းတန်ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » 3သိန်းတန်ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီး
Posted by Novy on Jun 19, 2012 in Health & Fitness | 38 comments
ႏိုဗီြစားခဲ့မိတဲ့ 3သိန္းတန္ေပါင္မုန့္နဲ့ သရက္သီး
မှတ်မှတ်ရရ ဇွန်1ရက်နေ့ ည တီဗွီကြည့်ရင်းနဲ့ ည11နာ်ရီကျော်လာတော့ ဗိုက်ကစားလာတယ်
ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားရမှာလဲပျင်းတော့ ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်မိတယ် အလွယ်စားလို့ရတာဘာရှိလဲပေါ့
ဟော… တွေ့ပါပြီ ပေါင်းမုန့် 4ချပ်
ပေါင်းမုန့်4ချပ်ယူပြီး တီဗွီရှေ့ကို ပြန်လာ ကြည့်ရင်နဲ့ စားမယ်ပေါ့
ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီး တွဲပြီးစားလိုက်တာပေါ့
စားနေရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထည်မှာ ေရေနံဆီ အနံ့လိုရတယ် အိမ်မှာလဲ ရေနံ့ဆီ
မရှိပါဘူး သရက်သီးကလားလို့ရှုကြည့်လိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး
ပေါင်မုန့်မှိုတက်နေလားလို့ ကြည့်တော့လည်း မှိုမတွေဘူး
အနံ့ကို သုသေတနပြုရင်းနဲ့ 3ချပ်ကုန်သွားတယ်
သေချာသွားပြီ ပေါင်မုန့်က ရတဲ့ အနံ့ ပါးစပ်မှာတောင်စွဲနေတယ်
ကျန်နေတဲ့ပေါင်မုန့် 1ချပ်ကို အမှိုက်ပုံထည်ထဲ့
အနံ့ပျောက်သွားအောင် သွားတိုက်မျက်နှာသစ် အလုပ်များသွားတယ်
တီဗွီကြည့်ချင်စိတ်ပါပျောက်သွားတယ် အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ 12နာရီထိုးနေပြီ
နောက်နေ့လည်း နေ့တစ်ဝက် ရုံးတက်ရအုံးမှာဆိုတော့ အိပ်ယာထည်ပဲဝင်လိုက်တော့တယ်
2း30 လောက်ကျတော့ ဗိုက်အရမ်းနာလို့ လန့်နိုးလာတယ်
ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာလည်း အော်ဂလီဆန်ပြီး အန်ချင်သလိုကြီးဖြစ်လာတယ်
ဝမ်းလဲသွားချင် အန်လဲအန်ချင် ဘာကို အရင်လုပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
ဒါနဲပဲ အန်ချင်တာကိုအောင့်ထားပြီး အိမ်သာအရင်တက် ပြီတာနဲ့အန်
ရေငတ်တော့ ရေသောက် အခန်းထဲတောင်ပြန်မရောက်ဘူး ဝမ်ထက်သွား
ပြီးတော့အန် အန်တိုင်းမှာလဲ ရေနံ့ဆီလို အနံ့ကြီးကပြန်ရနေ
ငါးခေါက်လောက်အန်တာနဲ့ ဝမ်းသွားပြီးတော့ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီ ဆေးဘီဒိုထဲမှာ ဓာတ်ဆားထုပ်ရှာ
ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်မှာလဲ ခါးနာနေလို့ တရုပ်အပ်စိုက်ပြီး
အိပ်ယာထည်မှာ မထနိုင်တဲ့ အမေပဲရှိတယ် ကိုယ့်ကို လုပ်ပေးမဲ့သူ ဘယ်သူမှမရှိ ဘူး
သွေးပေါင်ချိန်စက်ရှာ သွေးပေါင်ချိန်ကြည့်တော့ 100/60 ရှိသေးတယ်
အရမ်းမဆိုသေးဘူးပေါ့ အသွား နဲ့ အန်တာကတော့ မရပ်သေးဘူး
သောက်ပြီးတာနဲ့အန်တာနဲ့ ဝမ်းသွားတာ ဆက်တိုက် ဗိုက်ကလည်း အရမ်းအောက်
အချိန်ကြည့်လိုက်တော့ 4း30ကျော်နေပြီ လူလည် ပျော့နေပြီ ခြေတွေလက်တွေတောင်ကျင်နေပြီ အမေကလည်း သူ့ခန်းထည်ကနေ
စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ် သူလည်းကျမကို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်လို့တဲ့
ကျမကလည်း သူများတွေ အကူအညီတောင်ဘို့ စောနေသေးတော့ အားနာ
5နာရီ ထိုးတော့ အောက်ထက်ကအခန်းကို ဖုံးဆက် ဆေးရုံလိုက်ပေးဖို့ ပေါ့
သူတို့ကလည်း လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်ပေါ့ နောက်ကြည့်မြင်တိုင်က သူငယ်ချင်းကို သတိရပြီး
သူတို့ဆီကို ဖုံးဆက် သူတို့ကလည်း သူတို့ကားနဲ့ ထွက်ခဲ့မယ်တဲ့
အားတော့ နည်းနည်းရှိသွားတာပေါ့ ဆေးရုံရောက်ရင်တော့ မသေနိုင်တော့ဘူး
ပိုက်ဆံအိတ် ထဲကို ပိုက်ဆံနဲ့ တစ်ခြားလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲ့
အဝတ်အိတ် တစ်လုံးထဲကို အဝတ်အစားတွေနဲ့ စောင်တွေကို ထဲ့
ဗိုက်နာတာကို အံကြိတ်ခံပြီး လုပ်နေရတယ် 2နာရီ အတွင်းမှာ အန်တာနဲ့ သွားတာ
10ကြိမ်မကတော့ဘူး တိုက်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့လုပ်တော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကလွဲပြီးဘာမှ
မသယ်နိုင်တော့ဘူး တိုက်အောက်ကို ရောက်အောင်တောင် မနည်းဆင်းခဲ့ရတယ်
အောက်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းကားရောက်လာတယ် နီးနီးနားနား မဟာမြိုင်ဆေးခန်းပဲ
ပို့ပေးလို့ပြောလိုက်တယ် ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆေးရုံတက်ရမယ်တဲ့
တစ်ရက် ထည်မှာ ဝမ်းအခါ20လောက်သွားတာကော အစိမ်းရောင် ဝမ်းသွားတာကော
အတိုချုပ်လိုက်ရင်တော့ ဆေးရုံမှာ 3ညအိပ် 4ရက်နေလိုက်ရတယ် နေပြန်ကောင်းတဲ့ အထိ ဆေးဖိုး နဲထွေထွေ 3သိန်းလောက်ကုန်သွားပါတယ်
ဒါတောင် ရုံးက ခွင့်7ရက်စာ $100 ထဲ့မပေါင်းရသေးဘူး
အော်…. အစားမတော့ တစ်လုပ်ပါလား..
နိုဗွီစားခဲ့မိတဲ့ 3သိန်းတန်ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီး ရယ် အတော်လည်းကြေးကြီးပါလာနော်
ပေါင်မုန့်က ဘာတံဆိပ်လဲဟင် …
အဲဒီ့ဆိုင်က အဲဒီ့တံဆိပ်ကို ထက်ဝယ်ပြီး
ဂျာ … ထပ်ဝယ် စမ်းသပ်ဦးမယ်…
မစားတော့ပါဘူး ပေါင်းမုန့်ဆိုရင် ကြောက်လွန်းလို့
အမှိုက်ပုံးထဲ မထည့်ဘဲ ထပ်တွယ်မယ်ဆိုရင်
မနိုလောက်အစားဂျီးများတဲ့ လူက အဲဒီ့ပေါင်မုန့်ကို အရုံခံရင်းနဲ့ စားလိုက်မိတယ်
မနိုက ပေါင်မုန့် စိန်တလုံး ညှပ် ဆိုတဲ့ ဖုဒ်တစ်ခု
မနိုရယ် တော်သေးတာပေါ့ အကုန်မစားလိုက်တာ။ ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီးက မတည့်လို့လားဟင်။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ့မတိုင်ခင် စားထားတာတွေနဲ့ မတည့်တာများလားမသိဘူးနော်။ ဘာပဲပြောပြော အချိန်မီကုလိုက်ရလို့တော်သေးတာပေါ့။ ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သရက်သီးနဲ့ ပေါင်မုန့်က မတည့်စရာတော့ မရှိပါဘူး
ကံကောင်းလို့ပါလားနော်…အစားမတော်3ချပ်ဖြစ်သွားပြီ…
ဆေးရုံမှာ 3ညအိပ် 4ရက်နေလိုက်ရတယ် ဆိုတော့
အော်မနို ပျောက်နေပါတယ်အောက်မေ့တယ် ပန်းကမာ္ဘထဲ မှာ အဝဲလယ်လယ်ဖြစ်နေတာကိုး……. အော်သရက်သီးနဲ. ဈေးကြီးလိုက်ထာနော်…….. ၃သိန်းတောင်……
ဒါများအစ်မရယ် ဖုန်းဆက်ပေါ့လို. လာကူညီမှာပေါ့ဗျာ……. တော်သေးတာပေါ့ ဖုပွိုင်ဇင် မဖြစ်လို.
သိပ်ချစ်သွားပြီး နောင်းဟောင်းရယ် မဟုတ်တော့ဘူး…. မနိုဗွီက သိပ်ချစ်သွားပြီး သရက်သီးရယ်…….. ပေါ့နော်………
ဒီပို.စ်ကလဲ သုံးသိန်းတန်တာပေါ့နော်………. သူကြီးဆီတောင်း…
အခုတော့ လာထား ၁ဝ ရော့မနို ၂ကျပ်…. ခစ်ခစ်ခစ်
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မနိုဗွီရယ် … ။ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ …
တော်သေးတာပေါ့ ……ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပြီး ပြန်ကောင်းလာလို့ … ။
ဝမ်းသွားတာက အရမ်းအားယုတ်တာ …။ အန်တာနဲ့ ဝမ်းသွားနေတာက ..အစာအိမ်ခြေနေကြောင့် ဆက်စပ်နေလို့ … တပြိုင်နက်ဖြစ်တဲ့အခါ .. အရမ်း ခံရခက်ပါတယ် … ။
အိမ်မှာ လူမရှိတဲ့အခါ ပိုလို့တောင် ဒုက္ခရောက်သေးတယ် … ။ ဒီလောက်ပဲဖြစ်သွားတာ … ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ မှတ်ရတော့မယ် အစ်မရေ … ။ပေါင်မုန့်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို … သရက်သီးကြောင့်လည်း ဖြစ် နိုင်တယ်ထင်တယ် … ။ ပေါင်မုန့်ကလည်း ကြာရှည်ခံအောင် ဆေးတွေ သုံးထားမယ် …. သရက်သီးကလည်း အမှည့်လွယ်အောင် ဆေးတို့ထားမယ်ဆိုလျှင် နှစ်ခုပေါင်းလို့ ဒြပ်ပြုမိတဲ့အခါ … ဒီလိုများဖြစ်တတ်သလားပဲ … ။ သေချာတော့ မသိပါဘူး မှန်း ကြည့်တာပါ …. ။
သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အဒေါ်ဆို … တညလုံး ဝမ်းသွားတာ အခါ သုံးဆယ်နီးပါးတဲ့ … သူ့ခမျာ အိမ်သာထဲမှာတောင် ခုံယူပြီး ထိုင်နေရတဲ့ အဖြစ်ဆိုပဲ … ။ သူကတော့ အန်တာ တခါ နှစ်ခါလောက်ပဲ အန်တယ် … ။ နောက်နေ့ကျတော့ လူကမျော့ပြီး ဆရာဝန်အိမ်ပင့်ပြီး ဆေးသွင်းလိုက်ရတော့တယ်တဲ့ … ။ အခုလို မိုးရာသီမှာ အစားသောက်ကတော့ အတော်လေး ဂရုစိုက်ရတော့မယ်နော် ….။ သတိထားပြီးမှတ်သားစရာ ကိုယ်တွေ့ ပို့စ်လေးမို့ လက်မထောင်ပြီး အားပေးပါတယ် ။
မနို ကိုယ် တိုင် မို့ လို့ တော် သေးတယ် ပြောရ မှာပေါ့။ လူကြီးဖြစ်တဲ့ အမေနဲ့ ကလေးဖြစ်တဲ့ သမီး လေး သာဆို ပို ခံ ရလိမ့် မယ်။ ပြောသာပြော ပါ ၊ ကျမလည်း အစားမတော် တလုပ် ဆိုတဲ့ အတိုင်း သေလုနီးပါး ကြုံ ဖူးတယ်။
Ma Ei @
မနို့မေမေကို စိတ်ပူပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
နောက်နေ့ ရောက်တော့ မနိုအကိုကြီးနဲ့ ညီမဝမ်းကွဲတွေက
မနိုထင်တာတော့ ပေါင်မုန့်က ဈေးကြီးတယ်ထင်တာပဲ
အိမ်မှာ လူမရှိတဲ့ကြားထဲ အချိန်ကလည်း ညဘက်ဖြစ်တော့
ရွာသူားတွေလည်း အစားအသောက် စဉ်ချင်ရအောင် လို့ပါ
သမီးအိမ်မှာရှိရင် ပေါင်မုန့်က သူစားနေကျ
ဘီဘီ ရယ် ဝီရယ်တွဲမြည်းလိုက်ကြတာ
ကြာပြီဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကုန်ခဲ့တာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
ပြီးတော့ သရက်သီးပါတွဲလိုက်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ
ပန်ပန်တို့ရုံးက ဂျာကြီးဖြစ်တာနဲ့ ကွက်တိပဲ
နို့ ပရုပ်လုံးဖြစ်ပြီး ပိစိလေးဖြစ်တာကြာလှပေ့ါ
မနိုဗွီရဲ့ ၃ညအိပ် ၄ရက်ခရီးက အကုန်အကျများသလိုဘဲနော်။
အခြားစားခဲ့တာတွေနဲ့လည်း ရောသမမွှေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်မလား မသိဘူးနော်။
ထပ်တော့မစမ်းလိုက်ပါနဲ့ နောက်တခါလာပြန်ချီသေး ဖြစ်နေမှ ဟုတ်ပေ့နေအုံးမယ်။
မနိုရေ ဒါတောင် (3) ချပ်ပဲ စားလိုက်မိလို့နော်
(4) ချပ်လုံးအကုန်သာစားလိုက်ရင်တော့ ပိုဆိုးမလားပဲ …
ပေါင်မုန့်ကို စမ်းသပ်ပြီးရင်လည်း တံဆိပ်ပြောပြဦးနော် ……..
ဒါပေမယ့်အစ်မရယ်… တစ်လုပ် (၃)သိန်းဆိုတာတော့ လွန်လွန်းအားကြီးပါတယ်…
၃သိန်းတန် ပေါင်မုန့် ဆိုလို့ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်မိသွားလို့ ဝင်လာကြည့်တာ.. အစားမတော် တလုပ်ဖြစ်နေတာပဲ.. အဲဒီ ပေါင်မုန့် နောက်ဆုံး တချပ် ကို ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး စစ်သင့်တယ်။
ကံကောင်းလို့ပေါ့ Novy ရယ်။ ညဘက်ကြီး တစ်ယောက်တည်း ဒီလောက်ဖြစ်ခဲ့တာ…ပေါင်မုန့်နဲ့ သရက်သီးနဲ့က မတည့်တာလား…အစာအဆိပ်သင့်တာကလည်း ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကံကောင်းလို့ ရက်တိုတို လေးနဲ့ ပြန်ကောင်း သွားတယ် လို့ တွေးလိုက်ပါတော့။
အခုရော နေလို့ လုံးလုံးကောင်း သွားပြီလား။
အမြန်ဆုံးပြန်ပြီး ကျန်းမာပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
တောက်စ် (မူရင်း – ဂဂ)
ကင်မ်ချိ တွေ ကြားရင်တော့ ထိုင်ငို ကြတော့ မှာဘဲ။
တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။အစားအစာတွေထဲမှာ ရက်လွန်လို ့ဒီအနံ ့ထွက်တာ အတော်
ဆန်းသဗျ။ငွေကုန်တာ ပြန်ရှာလို ့ရပါတယ်ဗျာ။တော်သေး၏။
ဝိုင်းအားပေးတဲ့ သူတွေကိုပြန်ဖြေဖို့ အားကော ပြန်ပြည့်ပြီလားဟင် … :grin:
အစ် ဖရွန် အစ် အဲ ဂျင်ဂျာ … ဗျာ
သို ့ပေသည့် ပိုက်ဆံဆိုတာ လူကလုပ်တာမို ့..
ကျန်းမာရေးအတွက် ကုန်ခဲ့တာတွေကို မေ့လိုက်ပါတော့နော..။
မနို ကို လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သရက်သီး နဲ ့ပေါင်မုန် ့ရှောင်ရမယ် ဆိုတာ မှတ်လိုက်ပါဘီ။
မနိုရေ… ကျနော်လည်း အဲ့လိုဖြစ်ဖူးပါတယ်….
ပျောက်မလား ပျောက်မလားနဲ့ တစ်ညလုံး အထက်လှန်
အောက်လျှောဖြစ်ပြီး ကျိတ်ခံနေရင်း မခံနိုင်လို့
၂၄ နာရီ ဖွင့်တဲ့ အပြင်ဆေးခန်းကို ပြေးခဲ့ရပါတယ်..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲ့နေ့မနက်ဆို ကျိုက်ထီးရိုးသွားရမှာပါ။
ခရီးစဉ်မဖျက်ပဲနဲ့ အံကျိတ်ခံရင်း ဘုရားအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်…
(ဘဝမှာ အမှတ်တရပါ။) တစ်လမ်းလုံး ဘာမှမစားရပါဘူး
ဘာလို့ အစာဆိပ်သင့်လဲဆိုတော့… ပေါင်မုန့်ရယ် သရယ်သီးရယ်ကြောင်မဟုတ်ပါဘူး…
ဘဲဥ.. ရက်လွန်ဘဲဥနဲ့ တခြားအစာနဲ့ရောပြီး အဆိပ်ပေါက်သွားတာပါ….
ဥဆို မုန်းတယ်… ဥဆိုမုန်းတယ်… ဥဆို ဘာဥမှကို မကြည့်ချင်တော့တာ…
မနိုရေကံကောင်းလို့ပါလား။ သရက်သီးကများရော်နေလို့လား။ ကျွန်မအမေလဲ သရက်သီးရက်လွန်စားလိုက် တာဆေးရုံရောက်သွားရောပဲ။ အဲဒီလိုဖြစ်တာတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေများတယ်မှန်နော်။ အသွားမတော်တလှန်း၊ အစားမတော်တလုပ်တဲ့။ ကံသီပေလို့ပေါ့။
တွဲဖက် မစားသင့်သော အစားအစာ စာရင်းထဲမှာ စာရင်း အသစ်တိုးတာပေါ့….
အဲ့ဒါဂို တယားသဘောနဲ့ ကြည့်ယင် မကောင်းဗူး
ဘာဖစ်လို့လဲ ဆိုဒေါ့ တချို့ဂ စုတောင်းဒယ်လေ နိတ်ဘန်ကို ယက်တိုတိုနဲ့ ယောက်ယပါဆေ စိုလါး
နောက်တာပါ အမရေ ကျနော်လဲ ဖြစ်ဖူးတယ် ကို့ဖာသာကို စပ်ဆော့တာ ဒူးရင်းသီးနဲ့ အာမီရမ် ဘာဖြစ်လဲ မမေးနဲ့ ငရဲပြည်ကို ရက်တိုတိုနဲ့ ရောက်မသွားတာ ကံကောင်း…. ဟေ ဟေ့
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးမဖြစ်သကွဲ့ နိုဗွီသမီးဂလေးရဲ့ ဦးကြောင်ပေါပမယ်နားထောင်…။ အတိတ်ဘဝတခုမှာဒုံးက နိုဗွီဂလေး မန်ကျီးဖျော်ရည်ရောင်းပီး စီးပွားရှာခဲ့လို့ ပျံခန်ရဒါ။ အဂုဒေါ့ အဲဒီအကြွေးကျေသွားဂဲ့ဗီ။ အသေးစိတ်သိဂျင်ရင် aကြာင်ကြီးနဲ့ အပွိုင့်မန့်ယူဗာ။ သနားဂရုဏှာသက်စွာဖြင့် ဗူးကြောင်ကြီး :cool:
စိန်တလုံးသရက်သီး က ကြိုက်လွန်းလို့ နေပြည်တော်ကတောင်
ဘူးလိုက်မှာစားတာ သူ့ကိုလည်း အပြစ်မပြောရက်ပါဘူးရှင်
တစ်ခြားအစာတွေကတော့ ပုံမုန်စာနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ
ပေါင်မုန့်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထဲ့ပြီး စမ်းထားတယ်
သရက်သီးနဲ့ ရက်လွန်ပေါင်မုန့် က
ဦး ဦး @
စိန်တလုံးတော့ ပို့လို့ရတယ်နော် :-)
Dr. P နဲ့ သွားတာလား း-)
Thel Nu Aye@
မြတ်ကျော်သူ / ရဲစည် @
တွဲဖက် မစားသင့်သော အစားအစာ
1. သရက်သီး နဲ့ ရက်လွန်ပေါင်မုန့်
2. ဒူးရင်းသီးနဲ့ အာမီရမ်
3.ဟောင်ကောင် ကြက်သားသုတ် နဲ့
ဘီဘီ ရယ် ဝီရယ်
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ..အန်တီNovy ရေ ။
ကိုယ်ရေစစ် သွားတာ ပေါ့နော့ ..တီတီ နိုဗီ